Tag: dab | Martech Zone
Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu waxay u baahan yihiin xoogaa dib-u-waxbarasho markii aan kor saarno. Waxay u barteen inay lashaqeeyaan iibiyayaashooda suuq sida ay ugu dukaameystaan ​​raashinka. Waxay rabaan inay wax soo saaraan, qiimeeyaan oo ay wax iibsadaan. Waxaan horey u sameynay mashaariic suuq geyn runtiina hada waan ka xishoonaa hada. Ilaa aynaan qiimeyn karin mashruuc aan ku qancineyno dhowr jeer, waxaan caadi ahaan ka fogaaneynaa heshiiska. Annagu, taa beddelkeeda, waxaan ula shaqeynaa macaamiisheenna si joogto ah
Diyaar, Dab, Ujeeddo
Isniin, Oktoobar 25, 2010 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Douglas Karr
Fiidnimadan waxay ahayd habeen weyn oo lala qaatay xoogaa caan ah oo iibin, suuq geyn iyo khubaro caan ah Waxaa naloo casuumay makhaayad aad u qurux badan oo ku taal qol gaar ah. Ujeedada kulanku waxay ahayd in la caawiyo qof ay wada shaqeeyaan oo doonayey inuu meheraddiisa gaadhsiiyo heerka ku xiga… ama dhawr heer oo dhaafsiisan halka uu hadda joogo. Qolka ayaa waxaa ku sugnaa tan tan ah heshiis… sheeg waxa ay tahay in aad ku dhex sameyso